Shirka Waalid2Waalid | Boston Teachers Union
Home Shirka Waalid2Waalid
Fadlan nagu soo biir Sabtida, 27ka Maarso, 2021 Shirka Waalid2Waalid! Mawduuceena sanadkan waa Barashada, Waalidnimada, Waxbarida: Xoojinta Bulshooyinka Wadajir. Maaddaama aan dhammaanteen la jaanqaadnay isbeddelada ballaaran ee nidaamka waxbarashadeenna sannadkan, iskaashiga kaalmaynta ardayda ayaa ka muhiimsan sidii hore. Tani waa shir waalidiinta IYO barayaasha ay ku wadaagaan iyo wax iska bartaan, ku taageeraan ka qeybgalka qoyska, kor u qaadida u doodista qoyska, iyo xoojinta wada shaqeynta qoyska iyo baraha. Iska diiwaangeli halka hoose.
Kulanka dhacdadani waa BILAASH oo waxa lagu qaban Zoom ka! 10 AM ilaa 2:30 PM Sabtida, 27ka Maarso. Waxaad heli doonaa turjumaan diyaar ah iyadoo la diiwaangelinayo. Fadlan isdiiwaangali adigoo isticmaalaya foomka hoose!
Waa kan ajandaheena 27ka:
10 am- 11:20 am: Wadajir Cadaaladda Waxbarashada: Sawirashada Riyada Dugsiyadeenii
11:20 am-11:50 am: Bandhigga Kheyraadka Muqaalka (soo qaado qaddo sidoo kale)
11:50 am-12:45 pm: Kulan hawleed Qeybta 1
12:45- 12:55 pm: Yara-Nasasho waqti kooban
12:55 pm- 1:50 pm: Kulan hawleed Qeybta 2
1:50-2:00: Yara-Nasasho waqti kooban
2:00-2:30: Isku soo wada duub gebi ahaan
Soo dejiso xaashiyaha loogu talagalay dhajinta:
2021 Shirka Waalid2Waalid
Iimeel aan ahayn-BPS
Haddii aad tahay xubin BTU ah, AQOONSIGA BPS #
Ma u baahan doontaa fasiraad?
Aqoon isweydaarsiyo noocee ah ayaad xiiseyneysaa? Fadlan dooro labo:
Isgaarsiinta Qoyska/Aqoonyahanka Waa maxay khibraddii ugu fiicnayd ama xiriirkii aad la yeelatay macalinka ama waalidka? Su'aalo noocee ah ayaad rabtaa inay waalidiinta/macallimiintu ogaadaan bilowga sanadka? Sidee macallimiintu/waalidiinta uga shaqeyn karaan inay macluumaadka wadaagaan midba midka kale iyo wadajir? Laga soo bilaabo aasaaska isgaarsiinta islaa wadaagista macluumaadka iyo kheyraadka, waalidiinta iyo macallimiintu waxay baran karaan inay si wadajir ah u wada shaqeeyaan koox ahaan.
Abaabulka Dugsigaaga & Golaha Waalidiinta ee Magaalada oo dhan Maxay tahay arrimaha ugu waaweyn ee aad doonayso inaad wax ka qabato dugsigaaga sannadkan? Baro abaabulka si aad u wanaajiso bulshada dugsigaaga, adigoo faham fiican ka helaya meelaha waalidku isbedelka ka sameyn karo oo ay codad kooda kula wadaagi karaan. Baro halka aad ka bilaabi karto oo aad ka qayb qaadan karto - Golayaasha Waalidiinta, Golayaasha Iskuulka ku yaal iyo Golaha Waalidiinta ee Magaalada oo dhan.
Waxbarashada Gaarka ah: Helitaanka Adeegyada Lagu Taageero Ilmahaaga COVID waxay adduun keena u rogtay hoos-u-rogis, iyo gaar ahaan saameyn ku yeelatay ardayda leh baahiyaha gaarka ah. Baro sida loo maro nidaamka si aad u hesho adeegyada ilmahaagu u baahan yahay. Raadi cidda aad u wici karto si aad u hesho caawimaad iyo wixii kheyraad ah ee la heli karo. Aqoon isweydaarsigu wuxuu ku wajahan yahay qoysaska ardayda da' kasta leh.
Caafimaadka Maskaxda ee Ardayda iyo Qoysaska Kuligeen waxaan ku nool nahay duruufo aan caadi ahayn. Aqoon isweydaarsigan, waxaan ku qeexeynaa caafimaadka maskaxda/dareemaha, aqoonsiga iyo sahaminta siyaabaha guud ee caafimaadka maskaxda ay u saameyso jahwareerka, waxaana la wadaageynaa talooyin wax ku ool ah, talooyin, iyo kheyraad waxtar u leh qoysaska doonaya taageerada si ay u ilaaliyaan maskaxdooda/dareemaha caafimaadka iyo fayo-qabka, iyo xubnaha qoyska/qof aad jeceshahay.
Hagitaanka Ku-Xirnaanta Saaxiibtinimada Qoyska Hagitaanka Zoom wuxuu ahaa mid aad u adag! Aqoon isweydaarsigaan waxaa fududeyn doona aqoonyahan doonaya inuu la wadaago talooyinka iyo muuqaalada ka taageeri doona qoysaska iyo ardayda hagitaanka Zoom Chromebook, iyo sidoo kale ka jawaabida su'aalaha qoyska ee ku saabsan Zoom iyo barnaamijyada kale ee farsamada. U diyaar ahaw inaad ku dabaqdo waqtiga dhabta ah iyo/ama liistada su'aalaha tiknoolajiyada ah ee aad jeclaan lahayd taageerada!
Bartayaasha Luqadda Ingiriisiga: Xuquuqda iyo Kheyraadka Aqoon isweydaarsigan ayaa diirada lagu saari doonaa fahamka sida loo taageerayo Bartayaasha Luqadda Ingiriiska (ELLs) ee BPS. Ka qeybgalayaashu waxay heli doonaan qalab/macluumaad qiimo leh oo ku saabsan sida loogu doodo ilmahooda ELL ilamaha/carruurtooda. Waalidiinta ardayda ELL waxay fahmi doonaan xuquuqdooda waxayna ogaan doonaan kheyraadka ay heli karaan.
Xoojinta Aqoonsiga Dhaqan ee Ardayda inta lala Dagaallamayo Cunsuriyadda Aqoon isweydaarsigani wuxuu u keeni doonaa kaqeybgalayaasha wacyigelin waxa cunsuriyada nidaamsan tahay iyo sida aan ula dagaalanno cunsuriyada. Barayaashu iyo waalidiintuba sidoo kale waxay awoodi doonaan inay iska qataan xeelado lagu xoojinayo aqoonsiga dhaqameed ee ardaydooda guriga iyo dugsiga.
Difaac ka dhanka ah Ka Saarida: Ogaanshaha Xuquuqdaada Guriyeynta Aqoon isweydaarsigan waxaad ku baran doontaa waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato la dagaallanka ogeysiiska ka saarista, kororka kirada iyo iska bixinta deynta. Tababarkan waxaa loogu talagalay inuu ku tuso sida aad marka aad u dagaallameysid in aanad difaaci doonin naftaada oo keliya, laakiin sidoo kale bulshada oo dhan. Qaadi/garsoore kaliya ayaa kaa saari kara.
Boston Public Radio Full Show: 12/17/20
Listen to the full article on WGBH
On this day in 2001, a series of terror attacks devastated the United States. It…